နော်ဝေတွင်အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောယောက်ျားများအတွက်လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်း (၂၀၁၅) - Your Brain On Porn
နော်ဝေ (2015) တွင်လိင်တူဆက်ဆံသောလူတို့၏နမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ၏အသုံးပြုမှုကိုအကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ပါ
Scand J ကို Psychol ။ 2015 ဖေဖော်ဝါရီ 16 ။ Doi: 10.1111 / sjop.12203 ။
Traeen B ကို1, Noor SW, Hald GM က, Rosser BR, Brady အက်စ်အက်စ်, နိုင်ကြောင်း: D, Galos DL, မီးခိုးရောင်ဂျေအေ, Horvath KJ, Iantaffi တစ်ဦးက, Kilian, G, Wilkerson JM.
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလိင်တူချစ်သူ SEM စားသုံးမှုနှင့် HIV အန္တရာယ်အပြုအမူများအကြားတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှဆကျဆံရေးအပျေါအထူးအလေးပေးအတူနော်ဝေးနိုင်ငံယောက်ျား (MSM) နဲ့လိင်ရှိသည်သောလူတို့တွင်လိင်တူချစ်သူ-oriented လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ (SEM) ၏စားသုံးမှုပုံစံစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။ သင်တန်းသားများကိုနော်ဝေတွင်နေထိုင် 529 MSM တစ် SEM စားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်စစ်တမ်းဖြည့်စွက်အွန်လိုင်းစုဆောင်းပါဝင်သည်။ SEM မှထိတွေ့မှုတိုင်းတာသည့်ပစ္စည်းများအားလုံးမှတုန့်ပြန်ခဲ့သူ 507 သင်တန်းသားများ၏, 19% နောက်ဆုံး 90 နေ့ရက်ကာလ၌ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက် (UAI) နဲ့အကာအကွယ်မဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံအစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, 14% sero-စိတ်တိုးပွား UAI ခဲ့ပွီးလြှငျသိရသည်။ UAI အတွေ့အကြုံနှင့်အတူရှိသူများအနက် 23% လက်ခံစအိုလိင်ဆက်ဆံ (R-UAI) သတင်းပေးပို့ခြင်းနှင့် 37% INSERT စအိုလိင်ဆက်ဆံ (ကျနော်-UAI) ကဖော်ပြခဲ့သည်။ SEM စားသုံးမှုသိသိသာသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ bareback SEM ၏တိုးမြှင့်စားသုံးမှုနှင့်အတူသင်တန်းသားများကို multivariable စာရင်းဇယားကို အသုံးပြု. သည်အခြားအချက်များများအတွက်ချိန်ညှိပြီးနောက် UAI နဲ့ကျွန်မ-UAI မြင့်မားလေးသာမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းအသက်အရွယ်မှာ SEM သုံးပြီးစတင်သူကို MSM အစောပိုင်းကစတင်ခဲ့သူကို MSM ထက် UAI နဲ့ကျွန်မ-UAI ၏အနိမ့်လေးသာမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ အနာဂတ်သုတေသန MSM SEM ဦးစားပေးများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအချက်များနှင့် HIV လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများအကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်ထိန်းသိမ်းနည်းကိုဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်မှာပါရည်ရွယ်သင့်တယ်။
MSM; HIV ကာကွယ်တားဆီးရေး; နော်ဝေ; စအိုလိင်ဆက်ဆံ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ; အန္တရာယ်မကင်းလိင်